China And India | ရဟန်းတော် (မော်ဒန်တောရ)
နမော တဿ ဘဂဝတော အရဟတော သမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓဿ။ အရဟတော-ကိလေသာတည်းဟူသောရန်သူတို့ကို ဝါသနာနှင့်တကွပယ်သတ်နိုင်၊ သံသရာစက်ဝန်း၏ အကန့်ဒေါက်ဆံတို့ကိုလည်း ချိုးဖဲ့ဖျက်ဆီးနိုင်၊ဆိတ်ကွယ်ရာအရပ်၌သော်မှပင် မကောင်းမှုကို မပြုဘဲ နေနိုင်တော်မူ၍ လူနတ်ဗြဟ္မာသက်ရှိသတ္တဝါအားလုံးတို့၏ပူဇော်အထူးကို ခံယူတော်မူထိုက်သော။ သမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓဿ- ဒုက္ခ၊သမုဒယ၊ နိရောဓနှင့် မဂ္ဂဟူငြား၊ သစ္စာလေးပါး၊မြတ်တရားကို ပိုင်းခြားထင်ထင်၊ ကိုယ်တော်တိုင်တကယ်သိတော်မူသော။ တဿ ဘဂဝတော- အိဿရိယ၊ဓမ္မ,ယသ၊သိရီ,ကာမ၊ ပယတ္တဟု ဘုန်းတော်ခြောက်ပါးသခင် ထိုဘုရားရှင်အား။ နမော (နမာမိ) ရိုသေမြတ်နိုး လက်စုံမိုး၍ ရှိခိုးကန်တော့ပါ၏။
ရဟန်းတော် on 14.1.13 |
Subscribe to ရဟန်းတော် by Email
- စာအုပ်စာပေဆိုဒ်များ နေ့သစ် ရွှေစကား စကားဝါမြေ မြန်မာစာအုပ်များ အခမဲ့စာအုပ်ဆိုင် ၀ိညာဉ်သစ် မြန်မာတို့တွက် ဗမာ့ဂန္ထ၀င် မျှဝေလိုသောစာအုပ် အခမဲ့စာအုပ်များ မြန်မာ့စာကြည့်တိုက် စာအုပ်စာတမ်း ဘုံစာကြည့်တိုက် မဂ္ဂဇင်း အီးစာအုပ်များ မြန်မာပြည်သား မြန်မာ CC မြန်မာပိုင်အိုနီးယ်း
- ဘာသာစကား SPရေဒီယို ဘာသာစကား သင်ရိုး BC အင်္ဂလိပ်စာ အင်္ဂလိပ်စာ အင်္ဂလိပ်စာလေ့လာစရာ အင်္ဂလိပ်စာလေ့လာပါ အခမဲ့ဘာသာပြန်
- နည်းပညာဆိုဒ်များ - ကိုဇော် မောင်စေတနာ မောင်နိုင် ကိုရင်ပြည့်စုံ မနေသား မြန်မာ IT မိုးထက်မြင့် ကွန်ပျူတာ KP-3 နည်းပညာ IT Men's Blog ရန်အောင် MM-helpdesk ညီနေမင်း Saturngod ရဲမာန် Ogree မြန်မာ့သတင်း Templates BTemplates E-Templates IC-Templates Moh-Template Free-Template Templဒဇိုင်းနာ ကုဒ်ဂုရု ၀ဘ်ဒီဇိုင်း My Space စာဖိုင်မှအသံဖိုင်သို့
- ဖျော်ဖြေရေးဆိုဒ်များ - သံရုံးများ တီထွင်သူများ ကာရာအိုခေ မြန်မာ MP3 ဘောလုံးချစ်သူ
- ပြည်ပသတင်းဌာန ခေတ်ပြိုင် ရိုးမ မိုးမခ ဧရာဝတီ မဇ္ဈိမ
- စာအုပ်စဉ် - ပိဋကလမ်းညွှန်(၁) ပိဋကလမ်းညွှန်(၂) ပိဋကလမ်းညွှန်(၃) ရာဇဓမ္မအခဏ်း (၃) Buddha's Words ဇာတ်တော်အနှစ်ချုပ် Ox ခရီးသွား 2010 ပြက္ခဒိန် က၀ိလက္ခဏာသတ်ပုံ လိပိဒီပိကာကျမ်း အရပ်သုံးစကားများ ဟိန္ဒီစကား ကုလားသီချင်း ကလေးပုံပြင် ဆယ့်ကိုးဂျူလိုင် Online Published သူ နှင့် သူမ ရယ်စရာ ဟာသ ဇော်ဂျီ ခင်မျိုးချစ် သင်္ကြန် ရိုမန်တစ်က် ကဗျာ
- ဓမ္မဆိုဒ်များ - တိပိဋက BPS တရားဆိုဒ် သုတ္တန်တရားတော် ဗုဒ္ဓနက်တ် ဗုဒ္ဓနက်တ် ဗုဒ္ဓနက်တ် ဗုဒ္ဓနက်တ် ဗုဒ္ဓနက်တ် ဗုဒ္ဓနက်တ် နိဗ္ဗာန ဓမ္မအသံ DLV ရှေးဗုဒ္ဓဘာသာ ဓမ္မ ဓမ္မ E-Talk ဗုဒ္ဓတရားတော်များ
ရဟန်းတော် (မော်ဒန်တောရ). Design by Wpthemedesigner. Converted To Blogger Template By ကုက္ကိူစု Tested by မြောက်ဒဂုံမစိုးရိမ်.